एउटा ममताहिन आमाको कोखबाट जन्मिनु तिम्रो दोष रह्यो…? – YesKathmandu.com
एउटा ममताहिन आमाको कोखबाट जन्मिनु तिम्रो दोष रह्यो…?
काठमाडौं । चितवनको इच्छा कामनामा सालनालसहितको एक बेवारिसे बालक भेटिएपछि खानेपानी मन्त्री विना मगरले भावनात्मकरुपमा सामाजिक सञ्जालमा लेखिन् ‘सुन्दर जीवन पाएपनि यो धर्तिमा पहिलो पाइला टेक्न नपाउनु तिम्रो गल्ती होइन, एउटा ममताहिन आमाको कोखबाट जन्मिनु तिम्रो दोष रह्यो ।’
जन्म दिने आमा को हुन् ? कसैलाई थाहा छैन तर एउटा अवोध शिशुले जन्म लिएलगतै मृत्युको काखमा बस्यो । यस्तै निर्दयी आमाका शिकार शिशुहरु बन्न थालेका छन् । पछिल्लो समय विशेष गरी सहरभन्दा गाउँमा यस्तो घटनाहरु घटन थालेका छन् । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका गाउँमा बेवारिस अवस्थामा शिशुका शवहरु भेटिन थालेका छन् । दिन प्रतिदिन नेपाल समाज क्रृरतातिर गइरहेको तथ्य बाहिर आउन थालेका छन् ।
चितवनमा भेटिएका वेवारिसे बालकलाई अस्पतालसम्म पुरयाइएको थियो । तर उनको ज्यान जोगिएन । कतिपय यस्तै शिशुहरुको शव खेतबारिमा भेटिन थालेका छन् । बच्चा जन्माउने तर जन्मनसाथ खेतवारीमा फाल्न क्रृरर घटनाहरु बढ्दै गएका छन् । अधिकाँस छोराभन्दा छोरी शिशुको शव खेतबारिमा भेटिने गरेको छ । छोरा मोहमा छोरी जन्मने गरेपछि जिउदै लगेर खेतवारीमा फाल्ने गरिएका तथ्यहरु भेटिन थालेका छन् ।
दिन प्रतिदिन यस्ता घटना घट्दै गएका छन् । तर यस्ता क्रृरर घटना घटाउने आमाहरु कारवाहीको भागदार बनेका छैनन् । सन्तानको हत्या गर्ने आमा र परिवारमाथीको कारवाही नथाल्ने हो भने यो विकराल अबस्था आउन सक्ने स्वाथ्यकर्मीहरु बताउँछन् ।
कतिपय जनावरले पनि आफ्ना मृतक बच्चालाई जहाँ पायो त्यही छोडेर हिड्दैनन् । तर मानिसहरु जनावरभन्दा पनि क्रृरर बन्न थालेका छन् । यस्ता घटना घटाउने आमा र परिवारले कारवाहीको छुट पाउन थालेपछि मानवता विरोधी क्रृरता पनि बढ्दै गएका छन् ।
यस्ता घटना विशेष गरी तीन प्रकारले घटने गरेका छन् । छोराको आशमा जन्मिएकी छोरी, श्रीमान विदेशमा भएका श्रीमतिबाट जन्मिने अबैध बच्चा र प्रेम सम्बन्धमा गर्भ रहने र प्रेममा घात भएपछि जन्मिएका बच्चाहरु सालनालसहित फाल्ने गरिएको छ ।